ခပ်ဆိုးဆိုးကောင်လေးဇာတ်ရုပ်နဲ့အမြဲတွေ့ရတဲ့ ယူတို့ရဲ့ Kim Woo Bin အကြောင်း 💕 – Trend.com.mm
ခပ်ဆိုးဆိုးကောင်လေးဇာတ်ရုပ်နဲ့အမြဲတွေ့ရတဲ့ ယူတို့ရဲ့ Kim Woo Bin အကြောင်း 💕
Posted on August 23, 2018 by Noel
Kim Woo Bin ဆိုရင် “The Heirs” ဇာတ်ကားထဲက ခပ်ဆိုးဆိုးကောင်လေး၊ဂျစ်ကန်ကန်ကောင်လေးကိုပြေးမြင်မိကြတယ်ဟုတ်! သူ့ရဲ့ဇာတ်ရုပ်ကိုအမြဲပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ တောင်ကိုရီးယားမင်းသားချော Kim Woo Bin ဟာ အခုချိန်မှာတော့ ကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းသေးလို့ အနားယူနေရဆဲအချိန်လေးပါ။ဒါပေမဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်မပြတ်အောင်လို့ ပရိသတ်တွေသိပ်မသိကြသေးတဲ့ Kim Woo Bin ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
*အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းက မင်းသားချော Lee Jong Suk ပါ 💕
Kim Woo Bin နဲ့ Lee Jong Suk တို့ရဲ့ Bromance ကို တစ်ချို့ပရိသတ်တွေကတော့သိပြီးသားပဲဖြစ်မှာပါ။သူတို့က School 2013 မှာအတူတွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အရမ်းရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားခဲ့ကြတာပါ။သူတို့နှစ်ယောက်ဒိတ်နေကြတယ်လို့တောင် သတင်းထွက်လောက်တဲ့အထိ ညီအစ်ကိုလိုချစ်ကြတာပါ။သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်ဆိုတာလည်း အချစ်ပုံစံတစ်မျိုးပဲလို့ Woo Bin က အင်တာဗျူးမှာဖြေခဲ့ဖူးပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်အမြဲတမ်းမဆုံဖြစ်ပေမဲ့ မကြာခဏတွေ့ဆုံလေ့ရှိပါတယ်တဲ့။Twenty VIP press conference ပွဲကျင်းပတုန်းက Kim Woo Bin ဟာ အဲ့ဒီပွဲကိုမလာရင် စိတ်ဆိုးမယ်ဆိုပြီး Lee Jong Suk ကို ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ ။How cute!
*Kim Woo Bin ရဲ့ လက်သီးထိုးအားက Kim Jong Kook ထက်တောင်ပြင်းပါတယ်
Rm ပရိသတ်တွေဆိုရင် အဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာ Kim Jong Kook က အားအကြီးဆုံးလို့သိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Kim Woo Bin လာကစားတဲ့အခန်းမှာ လက်သီးထိုးတာဘယ်လောက်ပြင်းလဲဆိုပြီး စမ်းခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ Woo Bin ရဲ့ လက်သီးထိုးအားက ၈၃၇ တောင်ရှိခဲ့ပြီး Kim Jong Kook ရဲ့ လက်သီးထိုးအားက ၆၆၇ပဲရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ Woo Bin ရဲ့ Boxing skill က မြင့်တယ်ပြောရမှာပေါ့ 😁
*နှုတ်ခမ်းကိုလျှာနဲ့သပ်တတ်တဲ့အချက်လည်း ယူတို့ရဲ့ Woo Bin မှာရှိပါသေးတယ် 😍
*Kim Woo Bin ရဲ့အိပ်မက်ကတော့ မော်ဒယ်လ်ဖြစ်ချင်တာပါ
သူငယ်ငယ်လေးကတည်းက မော်ဒယ်လ်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာလို့ပြောပြခဲ့ဖူးပြီး ဖက်ရှင်မော်ဒယ်လ်အပိုင်းကို မေဂျာအဖြစ်ယူချင်ခဲ့ကြောင်း ပရော်ဖက်ဆာဆီအကြောင်းကြားတင်ပြခဲ့ဖူးပါသေးတယ်တဲ့။
*အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀တုန်းက Kim Woo Bin က မျက်မှန်လေးနဲ့ပါ
*Bad Boy ပုံစံဇာတ်ရုပ်ကို သူကပိုပြီးကျွမ်းကျင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်
ဒါကသူ့ရဲ့ Trademark လိုတောင်ဖြစ်နေပါပြီ။ Heirs ၊ School 2013 နဲ့ Gentleman’s Dignity ၊The Con Artists တို့မှာ သူက ခပ်ဆိုးဆိုးကောင်လေးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
*သူ့ရဲ့နာမည်အရင်းက Kim Hyun Joong ဖြစ်ပြီး Kim Woo Bin က အနုပညာနာမည်ပါ။ဒါပေမဲ့ သူကလည်း နာမည်အရင်းကိုခေါ်ရင်မကြိုက်ပါဘူးတဲ့။
*သူ စစချင်းပွဲဦးထွက်တုန်းက သူ့ကို Bigbang အဖွဲ့ဝင် T.O.P နဲ့ဆင်တူတယ်လို့ ပရိသတ်တွေကပြောကြပါသေးတယ်။
*ပထမဆုံးသူခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားဟာ Bae Suzy နဲ့တွဲဖက်ရိုက်ကူးတဲ့ Uncontrollably Fond ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဇာတ်ကားဟာ အာရှတစ်ခွင်အောင်မြင်မှုအကြီးအကျယ်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံမှာပိုပြီးလူကြိုက်များအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
*သူက ဟန်မြစ်ကမ်းနားတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ရတာအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပြီး ခေါက်ဆွဲပြုတ်ကိုလည်းအရမ်းကြိုက်ပါတယ်တဲ့။
ဒီလောက်ဆိုရင် Woo Bin ရဲ့ ပရိသတ်လေးတွေကျေနပ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်နော် ❤
Kim Woo Bin ဆိုရငျ “The Heirs” ဇာတျကားထဲက ခပျဆိုးဆိုးကောငျလေး၊ဂဈြကနျကနျကောငျလေးကိုပွေးမွငျမိကွတယျဟုတျ! သူ့ရဲ့ဇာတျရုပျကိုအမွဲပီပွငျစှာသရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ တောငျကိုရီးယားမငျးသားခြော Kim Woo Bin ဟာ အခုခြိနျမှာတော့ ကနျြးမာရေးသိပျမကောငျးသေးလို့ အနားယူနရေဆဲအခြိနျလေးပါ။ဒါပမေဲ့ ပရိသတျတှနေဲ့အဆကျမပွတျအောငျလို့ ပရိသတျတှသေိပျမသိကွသေးတဲ့ Kim Woo Bin ရဲ့အကွောငျးလေးတှကေိုပွောပွပေးခငျြပါတယျ။
*အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးက မငျးသားခြော Lee Jong Suk ပါ 💕
Kim Woo Bin နဲ့ Lee Jong Suk တို့ရဲ့ Bromance ကို တဈခြို့ပရိသတျတှကေတော့သိပွီးသားပဲဖွဈမှာပါ။သူတို့က School 2013 မှာအတူတှဲဖကျသရုပျဆောငျခဲ့ပွီး အရမျးရငျးနှီးတဲ့သူငယျခငျြးတှဖွေဈသှားခဲ့ကွတာပါ။သူတို့နှဈယောကျဒိတျနကွေတယျလို့တောငျ သတငျးထှကျလောကျတဲ့အထိ ညီအဈကိုလိုခဈြကွတာပါ။သူငယျခငျြးသံယောဇဉျဆိုတာလညျး အခဈြပုံစံတဈမြိုးပဲလို့ Woo Bin က အငျတာဗြူးမှာဖွခေဲ့ဖူးပါတယျ။သူတို့နှဈယောကျအမွဲတမျးမဆုံဖွဈပမေဲ့ မကွာခဏတှဆေုံ့လရှေိ့ပါတယျတဲ့။Twenty VIP press conference ပှဲကငျြးပတုနျးက Kim Woo Bin ဟာ အဲ့ဒီပှဲကိုမလာရငျ စိတျဆိုးမယျဆိုပွီး Lee Jong Suk ကို ခွိမျးခွောကျခဲ့ပါတယျတဲ့ ။How cute!
*Kim Woo Bin ရဲ့ လကျသီးထိုးအားက Kim Jong Kook ထကျတောငျပွငျးပါတယျ
Rm ပရိသတျတှဆေိုရငျ အဖှဲ့ဝငျတှထေဲမှာ Kim Jong Kook က အားအကွီးဆုံးလို့သိကွပါတယျ။ဒါပမေဲ့ Kim Woo Bin လာကစားတဲ့အခနျးမှာ လကျသီးထိုးတာဘယျလောကျပွငျးလဲဆိုပွီး စမျးခဲ့ကွပါတယျ။အဲ့ဒီမှာ Woo Bin ရဲ့ လကျသီးထိုးအားက ၈၃၇ တောငျရှိခဲ့ပွီး Kim Jong Kook ရဲ့ လကျသီးထိုးအားက ၆၆ရပဲရှိခဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒီတော့ Woo Bin ရဲ့ Boxing skill က မွငျ့တယျပွောရမှာပေါ့
*နှုတျခမျးကိုလြှာနဲ့သပျတတျတဲ့အခကျြလညျး ယူတို့ရဲ့ Woo Bin မှာရှိပါသေးတယျ
*Kim Woo Bin ရဲ့အိပျမကျကတော့ မျောဒယျလျဖွဈခငျြတာပါ
သူငယျငယျလေးကတညျးက မျောဒယျလျဖွဈခငျြခဲ့တာလို့ပွောပွခဲ့ဖူးပွီး ဖကျရှငျမျောဒယျလျအပိုငျးကို မဂြောအဖွဈယူခငျြခဲ့ကွောငျး ပရျောဖကျဆာဆီအကွောငျးကွားတငျပွခဲ့ဖူးပါသေးတယျတဲ့။
*အထကျတနျးကြောငျးသားဘဝတုနျးက Kim Woo Bin က မကျြမှနျလေးနဲ့ပါ
*Bad Boy ပုံစံဇာတျရုပျကို သူကပိုပွီးကြှမျးကငျြစှာသရုပျဆောငျနိုငျပါတယျ
ဒါကသူ့ရဲ့Trademark လိုတောငျဖွဈနပေါပွီ။ Heirs ၊ School 2013 နဲ့ Gentleman’s Dignity တို့မှာ သူက ခပျဆိုးဆိုးကောငျလေးအဖွဈသရုပျဆောငျခဲ့ဖူးပါတယျ။
*သူ့ရဲ့နာမညျအရငျးက Kim Hyun Joong ဖွဈပွီး Kim Woo Bin က အနုပညာနာမညျပါ။ဒါပမေဲ့ သူကလညျး နာမညျအရငျးကိုချေါရငျမကွိုကျပါဘူးတဲ့။
*သူ စစခငျြးပှဲဦးထှကျတုနျးက သူ့ကို Bigbang အဖှဲ့ဝငျ T.O.P နဲ့ဆငျတူတယျလို့ ပရိသတျတှကေပွောကွပါသေးတယျ။
*ပထမဆုံးသူခေါငျးဆောငျမငျးသားအဖွဈပါဝငျရိုကျကူးခဲ့တဲ့ဇာတျကားဟာ Bae Suzy နဲ့တှဲဖကျရိုကျကူးတဲ့ Uncontrollably Fond ဇာတျကားဖွဈပွီးအဲ့ဒီဇာတျကားဟာ အာရှတဈခှငျအောငျမွငျမှုအကွီးအကယျြရရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။အထူးသဖွငျ့ တရုတျနိုငျငံမှာပိုပွီးလူကွိုကျမြားအောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။
*သူက ဟနျမွဈကမျးနားတဈလြှောကျလမျးလြှောကျရတာအကွိုကျဆုံးဖွဈပွီး ခေါကျဆှဲပွုတျကိုလညျးအရမျးကွိုကျပါတယျတဲ့။
ဒီလောကျဆိုရငျ Woo Bin ရဲ့ ပရိသတျလေးတှကေနြေပျကွမယျထငျပါတယျနျော ❤
နယူးယော့မြို့ ကိုရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်တဲ့ မှော်ဆန်ဆန်ဘားဆိုင် The Cauldron
ကာတွန်းချစ် ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ” Ralph Breaks the Internet ” Trailer 😍